Haweenka iyo Qosyka, 08 January 2020
Arbaco 8 January 2020
Haweenka iyo Qoyska: Haweenka Iibiya Uunsiga iyo Shaaha
Barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay haweenka Soomaliyeed ee qaxootiga ku ah Nairobi iyo Mumbasa ee ku shaqeysa iibinta Shaaha iyo Uunsiga
Haweenka iyo Qoyska: Nolosha Qoyska Beeraleyda ah
Qoyska beeraleyda ah ee Soomaaliyeed waxa ay badanaa noloshooda ku tiirsan tahay wixii ay ka tabcadaan beertooda. Falasahda beertana waa mid ku dhisan iskaashi iyo is caawimaad qoyska dhexdiisa ah.
Haweenka Iyo Qoyska: Umuliso Dhaqameedka
Umulisadu waa xirfadle caafimaad oo tababaran oo caawisa haweenka caafimaadka qaba inta lagu jiro foosha, umulinta, iyo dhalashada carruurtooda. Umulisooyinku waxay ku umulin karaan dhallaanka xarumaha dhalashada, guriga, iyo sidoo kale cisbitaalka.
Dhibaatada Dumarka Saboolka ah Ka Haysata Dhiigga Caadada
Caadada ku dhacda dumarka waa mid gabar kasta oo qaan gaar ah oo caafimaad qabta ku dhacda ugu yaraan bishiiba hal mar.Qofka dumarka ah ayaa marka ay caadada ku dhacdo waxa ay u baahan tahay inay hesho suufka loogu tala galay xakamaynta dhiigga ee saacadaha dheerna xajin kara.
Dalqo Goynta Waxay Carruurtu ka Qaadi karaan HIV AIDS
Maalinta AIDS-ka adduunka ee sanadkan 2019 ee la xusay toddobaadkan ayaa hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay muujisay isbeddelka ay bulshooyinku saameynayaan si loo soo afjaro jeermiska HIV AIDS
Haweenka Iyo Qoyska: Xarunta Horumarinta Qoyska ee Guryosamo
Barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee toddobaadkan (November 20,2019) oo aanu ku eegeyno Sanduuqa Taban-taabo ee Xarunta Horumarinta Qoyska ee Guryosamo ee magaalada Muqdisho oo wadda qorshe ay dhallinyarada qaba baahiyaha gaarka ah uga caawineyso guurkooda.